सेक्सका लागि महिलालाई कसरी फकाउने ? – Saurahaonline.com
सेक्सका लागि महिलालाई कसरी फकाउने ?
काठमाडौं,२६ कात्तिक । यौन जीवनका बारेमा विभिन्न अध्ययनहरु हुने गर्छन् । ती अध्ययनबाट यौनका बारेमा नयाँ नयाँ कुरा पत्ता लाग्छ । भर्खरै गरिएको एक अध्ययनबाट युवतीलाई कसरी यौन सम्पर्क राख्नका लागि राजी बनाउने भन्ने बारेमा पत्ता लागेको छ ।